एकसातादेखि नेपालगन्जमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अचानक किन गए बर्दिया ? – Etajakhabar
एकसातादेखि नेपालगन्जमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अचानक किन गए बर्दिया ?
नेपालगन्ज – विहीबारदेखि नेपालगन्जमा रहनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बङ्गलामुखि मन्दिर दर्शनका लागि आज बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया जानुभएको छ । नेपालगन्जको धम्वोजी गुलरिया सडकमार्ग भएर पूर्वराजा शाह परिवार बगुलामुखि मन्दिर दर्शनका लागि केहीबेर अघि त्यसतर्फ जानुभएको पूर्वराजाको सचिवालयले जनाएको छ । ६ दिनदेखि नेपालगन्ज भुजयगाउँस्थित होटल सोल्टीमा सपरिवारसहित बस्दै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र परिवार आजदेखि जिल्ला भ्रमणमा निस्केको हो ।
बर्दियामा बङ्गलामुखि मन्दिर दर्शनसँगै स्थानीबासीसँग भलाकुसारी गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र परिवार सांझ नेपालगन्ज फर्किएको छ । भोली सुदूरपश्चिमको धनगडी जाने कार्यक्रम रहेको सचिवालयले जनाएको छ । दुई हप्ता लामो बसाइमा पूर्वराज परिवारले पश्चिम बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ र धनगढीका विभिन्न धार्मिक शक्ति पिठहरुको दर्शन गर्ने र पर्यटकियस्थलहरुको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यता राजपरिवार सहित नेपालगन्जमा रहेकी पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले प्रसिद्ध शक्तिपिठ बागेश्वरीको दर्शन गर्नुभएको छ । आज विहान पूर्व युवराज्ञी हिमालीले बागेश्वरी माताको पूजाआजा गर्नुभएको हो । उहाँले मन्दिर क्षेत्रमा रहेको शिव मन्दिरमा समेत पूजाआजा गर्नुभयो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी भने बागेश्वरी मन्दिर दर्शनका लागि आज जानुभएन । स्रोतका अनुसार, एक साता भन्दा बढी समय नेपालगन्जमा बिताउने योजनामा रहेका पूर्व राजा शाह पनि बागेश्वरी मन्दिरको दर्शन गर्नुहुने छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष १८, २०७४ समय: २०:०६:२३